ခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်း၏အရိပ်နိမိတ်များ | Signs of Christ's Second Coming | Real Conversion
လော့စ်အိန်ဂျယ်လ်ရှိ Baptist Tabernacle အသင်းတော်တွင် ၂၀၁၅ခုနှစ် မေလ ( ၁၇ ) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားသော Dr. R. L. Hymers, Jr.၏ တရားဒေသနာဖြစ်သည်။
"ထိုအမှုအရာတို့သည် အဘယ်ကာလမှဖြစ်မည်ကို၄င်း၊ ကိုယ်တော် သည်ကြွလာ၍ ဤကပ်ကမ္ဘာကုန်သောပုပ္ပနိမိတ်သည် အဘယ်နိ မိတ်ဖြစ်မည်ကို၄င်း အမိန့်ရှိတော်မူပါဟု လျှောက်ကြ၏။" ( မဿဲ ၂၄း ၃ )
ကျွန်တော်သည် နေ့တိုင်း သတင်းစာသုံးစောင်ကို ဖတ်ရှုသည်။ ကြေးနန်ရုံးရှိသတင်း နှစ်ခုကိုလည်း အချိန်အနည်းငယ်ပေးလျက် ကြည့်ရှုလေ့ရှိပါသည်။ သတင်းများထဲတွင် ကျွနု်ပ် တို့ကြားသိသမျှသောအရာက ကျွန်တော်တို့၏ကမ္ဘာသည် ကသောင်းကနင်းဖြစ်နေသည်ဟူ သောအရာကို ပြသလေ့ရှိပါသည်။ အကြမ်းဖက်မှုများ၊ စစ်ပွဲများ၊ ဓါးစာခံများ၊ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက် မှုများသည် ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်းနေ့တိုင်း ဖြစ်ပျက်နေလျက်ရှိပါသည်။ အသင်းတော်ရမှတ်များကို မီး ရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ပြီး ရာပေါင်းများစွာတို့က ခရစ်ယာန်များကို ခေါင်းဖြတ်သတ်ခဲ့ကြသည်။ အီရန် သည်လည်း မကြာမှီ အနုမြူဗုံးကို ပိုင်ဆိုင်ရတော့မည်။ သူတို့က ကျွနု်ပ်တို့နေထိုင်သောနေရာ များကို ခြိမ်းခြောက်ပေလိမ့်မည်။ သူတို့က သင်တို့မြို့များတွင် ဗုံးများကို မှောင်ခိုတင်သွင်းပြီး ဖောက်ခွဲမည်ဟု ဆိုကြသည်။ ကျွနု်ပ်တို့ဘဝအသက်တာများကို ဖျက်ဆီးမည်ဟုလည်း ဆိုကြ သည်။
သမ္မတ ဂျွန်အက်ဖ်ကနေဒီမှာ ကစ်သိုလစ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပါသည်။ တနေ့တွင် သူသည် ဘီလီဂရေဟမ်နှင့်အတူ ဂေါက်သီးရိုက်ကြသည်။ သူက ဂရေဟမ်အား ကစ်သိုလစ်အသင်း တော်ကလည်း ခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းအကြောင်းကို ယုံကြည်ကြသည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ သူတို့က ''ယခုမှစ၍ လျှင်မြန်သောသူနှင့်သေသောသူတို့ကို တရားစီရင်ရန် အလျှင်အမြန်လာမည်" ဟုဆိုသော ယုံကြည်မှုကို ရွက်ဆိုလေ့ရှိကြပါသည်။ သို့ရာတွင် သမ္မတ ကနေဒီက ခရစ်တော်ကြွလာခြင်းအကြောင်းကို ပို၍သိလိုပေသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၆၀ တွင် ဆာဝင်းစတွန်းချာလ်ဟီးသည် ဂရိဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လျက်နေသေးသည်။ သူသည် လူ ငယ်ဧဝံဂေလိဆရာလေး ဘီလ်ဂရေဟမ်ကို သူ့ရုံးတည်ရှိရာ လန်ဒန်မြို့ရှိ ထင်းဒေါင်းလမ်းတွင် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ ချာလ်ဟီးက သူ့အား "လောကကြီးသည် ရေရှည်သွားနိူင်တော့မည်ဟု မထင်မိပါ။ ကျွနု်ပ်တို့ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိူင်စွမ်းလည်းမရှိတော့ပါ" ဟုဆိုပါသည်။ ယနေ့ တွင်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွင်ရှိနေသောလူတိုင်းသည် ထိုကြောက်ရွံ့မှုမျိုးရှိဟန်တူပါသည်။ ကျွနု်ပ် တို့နေထိုင်သည့်ကမ္ဘာကြီးသည် မျက်မှောက်ကာလတွင် ပျောက်ကွယ်သွားပေလိမ့်မည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ကမ္ဘာကြီး၏အဆုံးပိုင်းဆီသို့ ဦးတည်နေဟန်ရှိပါသည်။
တပည့်တော်များသည် ထိုအမှုအရာပေါ်တွင် အလွန်ပင် စိတ်ဝင်တစားရှိခဲ့ကြသည်။ သူတို့က ယေရှုအား " ကိုယ်တော်ပြန်လာသည့်အချိန်ကာလ၏နှင့်လောကကြီးအဆုံးပိုင်း၏ ပုပ္ပနိမိတ်သည် အဘယ်အရာဖြစ်သည်" ကို မေးမြန်းကြပါသည်။ "လောက" ဟု ဘာသာပြန် ဆိုထားသည့် ဂရိစကားလုံးမှာ "aion" ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ "အချိန်ကာလ" ခရစ်ယာန်တို့ ၏ခေတ်ကာလပိုင်းခြားထားသည့် ကျွနု်ပ်တို့အသက်ရှင်နေသည့် ယခုအချိန်ပင် ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်က တပည့်တော်များ ထိုသို့မေးမြန်းထားခြင်းကို ပြစ်တင်ခြင်းမရှိပါ။ "ပုပ္ပနိမိတ်" ရှည် ကြီးကိုပင် ပေးခဲ့သေးသည်။ သူတို့က ပုပ္ပနိမိတ်တစ်ခုကိုသာမေးမြန်းထားသော်လည်း မာကု ၁၃ နှင့် လုကာ ၂၁ တွင် တွေ့ရှိရသည့် သံလွင်တောင်ပေါ်ဒေသနာတွင် များစွာသောနိမိတ် ကိုပေးထားပါသည်။
ခရစ်တော်ပေးထားသည့် နိမိတ်နှင့်ပါတ်သက်ပြီး အမှားအယွင်းသုံးခုရှိပါသည်။ ပထမ အချက်မှာ ဤနိမိတ်လက္ခဏာများကို ပထမရာစုသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိစေသည့် သဘာဝလွန် တွန်းအားပင်ဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ်ကယ်လ်ဗင်းအယူဝါဒရှိသူများသည် ထိုသို့လုပ်ဆောင်သူ များဖြစ်ကြပါသည်။ သူတို့သည် မှားယွင်းလျက်ရှိကြသည်ဟု ကျွနု်ပ်ထင်မိသည်။ ဥပမာအား ဖြင့် ၄င်းက အပိုဒ်ငယ် ၁၄ သည် ပထမရာစုကိုရည်ညွှန်းသည်ဟူသောယူဆချက်များကိုဖြစ်စေ သော်လည်း ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းနှင့်အနက်ဖွင့်ခြင်းကို ထိန်းသိမ်းထားပေသည်။ ထိုကျမ်းပိုဒ် က ဤသို့ဆိုထားပါသည်။
"လူမျိုးအပေါင်းတို့အား သက်သေဖြစ်မည်အကြောင်းနိူင်ငံတော်နှင့် ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားကို လောကီနိူင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှတို့၌ ဟောရလိမ့်မည်။ သို့ပြီးမှ အဆုံးသည်ဖြစ်လတံ့။" ( မဿဲ၂၄း၁၄)
ထိုအရာမှာ ခရစ်တော်ထံမှလာသော ရှင်းလင်းသေချာသောပရောဖက်ပြုချက်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရာသည် ယနေ့ကာလအချိန်အထိ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဖြစ်သေးပါ။
တပည့်တော်များသည် ဧဝံဂေလိတရားကို ရောမအင်ပါယာအနှံဟောပြောကြသည် ကို ကျွနု်ပ်တို့သိရသည်။ သို့ရာတွင် ဧဝံဂေလိတရားကို "ကမ္ဘာအနှံ" ဟောပြောခြင်းတော့မရှိ ပေ။ တောင်အမေရိကနှင့်မြောက်အမေရိက၊ ဂျပန်၊ သြစတြေးလျ၊ ပင်လယ်ကန်းကျွန်းများ စ သည်တို့တွင်လည်း သွားရောက်ဟောကြားနိူင်ခြင်းမရှိပါ။ မဿဲ ၂၄း ၁၄ သည် ယခုတွင် "လောကတွင်" အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။
ထို့နောက် နိမိတ်လက္ခဏာနှင့်ပါတ်သက်ပြီး ဒုတိယအမှားတစ်ခုမှာ အနာဂတ်တွင် သူတို့အားလုံးကို တွန်းပို့ခြင်း၊ ခုနှစ်နှစ်ဘေးဒဏ်ကြီးကာလဆီသို့ တွန်းပို့ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရာမှာ ခေတ်သစ်ကာလပိုင်းခြားသောသူများလုပ်ဆောင်သောအရာပင် ဖြစ်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် နိမိတ်လက္ခဏာအားလုံးကို နောက်သို့ပြန်ပို့ခြင်း၊ ပထမရာစုဆီသို့ပို့ဆောင်ခြင်း သည် မှားယွင်းသောအရာဖြစ်သည်ဟု ကျွနု်ပ်ထင်ပါသည်။ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလဖြစ်သည့် ရှေ့ သို့ပို့နေခြင်းသည်လည်း မှားယွင်းသောအရာဖြစ်ပါသည်။ "နိမိတ်လက္ခဏာများ" သည် ယခု မျက်မှောက်ကာလဆိုးသည့်သည့်နေ့ရက်အတွက် ပေးထားသည်ဟု ကျွနု်ပ်မြင်မိပါသည်။
ယနေ့ခေတ်အသင်းတော်အများစုတွင် နိမိတ်လက္ခဏာနှင့်ပါတ်သက်ပြီး တရားဟော ကြားခြင်းမရှိသည်မှာလည်း ထူးဆန်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယခုခေတ်၌ နိမိတ်လက္ခ ဏာကို ငြင်းပယ်ခြင်းသည်လည်း နိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရာက အချို့ သောတရားဟောဆရာများအား "သူ၏ကြွလာခြင်းကတိတော်ကားအဘယ်မှာရှိသနည်း" ၂ပေ ၃း ၃-၄ )ဟုဆိုသော "သရော်" သည့်အမျိုးအစားများတွင် ချထားလျက်ရှိသည်။ ထိုအပြင် နိမိတ်လက္ခဏာကိုငြင်းပယ်ခြင်းက "မင်္ဂလာဆောင်လုလင်သည် ကြန့်ကြာနေသောအချိန်တွင်၊ သူတို့အားလုံးသည် ငိုက်မြည်းအိပ်ပျော်ကြသည်" ကိုပြသသည်ဟု ကျွနု်ပ်ထင်မိပါသည်။ (မဿဲ ၂၅း ၅ ) အိပ်ပျော်နေသောအသင်းတော်များသည် နိမိတ်လက္ခဏာများအကြောင်းကို လုံးဝနားမထောင်လိုကြပါသည်။ ထိုအရာက သူတို့ကို နိူးထစေမည်ဖြစ်သည်။ Dr. M. R. DeHaan က "အန္တရယ်နှစ်မျိုးရှိသည်၊ ပထမမှာ နေ့ရက်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ဒုတိယအချက်မှာ အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုအဖြစ် နိမိတ်လက္ခဏာကိုလစ်လျှူရှုထားခြင်းဖြစ်သည့် ဆန့်ကျင် ဘက်မကောင်းသောအမှုအရာဖြစ်သည်" ဟုဆိုပါသည်။ (M. R. DeHaan, M.D., Signs of the Times, Kregel Publications, ၁၉၉၇၊ စာ- ၁၃ ) ယနေ့ခေတ်အသင်းတော်အများစုတွင် တရားဟောဆရာများသည် နိမိတ်လက္ခဏာကို လစ်လျူရှုထားကြပါသည်။
တတိယအမှားတစ်ခုလည်းရှိသေးသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် Harold Camping က ချီဆောင်ခြင်း၌ ခရစ်တော်၏ မိုးတိမ်ပေါ်တွင် ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းကို နေ့ရက် နာရီဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်မှာ ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ မေလ ၂၁ ရက်နေ့၊ ညနေ ၆းဝဝ နာရီ တွင်ဖြစ်မည်အကြောင်း ပြောခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် သူသည် အမှားတစ်ခုကို ပြုမိခဲ့သည်။ ယေရှုက "ထိုနေ့ရက်ကို အဘယ်သူမျှမသိနိူင်" (မဿဲ ၂၄း ၃၆) ဟု အတိအလင်းဖော်ပြထား ပါသည်။ လူတစ်ဦးက ခရစ်တော်ကြွလာမည်အချိန်နာရီကိုသိသည်ဟုဆိုလျှင် ထိုသူကို နားမ ထောင်မိပါစေနှင့်။
တပည့်တော်များက ခရစ်တော်ကြွလာခြင်းနှင့် "နောက်ဆုံးသောကာလ အကြောင်း နှင့်သက်ဆိုင်သည့် နိမိတ်လက္ခ ဏာတစ်ခုကိုသာတောင်းဆိုခဲ့ကြသော်လည်း" ခရစ်တော်က များစွာသောနိမိတ်လက္ခဏာအကြောင်းကို ပေးထားပါသည်။ ကျွန်တော်သည် အမျိုးအစားသုံး ခုဖြင့် ခရစ်တော်နှင့်တမန်တော်များပေးထားသည့်နိမိတ်လက္ခဏာများကို စာရင်းပြုခြင်းသည်။
၁။ ပထမအချက်၊ အသင်းတော်များတွင်ရှိသော နိမိတ်လက္ခဏာများ
ထိုအရာမှာ ယေရှုက မဿဲ ၂၄း ၄-၅ တွင်ပေးထားသည့် ပထမဆုံးနိမိတ်လက္ခဏာ ပင်ဖြစ်ပါသည်။
"ယေရှုကလည်း၊ သင်တို့ကိုအဘယ်သူမျှ မလှည့်ဖြားစေခြင်းငှါ သတိပြုကြလော့။ အများသောသူတို့က၊ ငါသည်ခရစ်တော်ဖြစ်၏ ဟုဆိုလျက်၊ ငါ၏အယောင်ကိုဆောင်၍ပေါ်လာသဖြင့် လူအများ တို့ကို လှည့်ဖြားကြလိမ့်မည်။" ( မဿဲ ၂၄း ၄-၅)
ဤသည်က မိမိကိုယ်ကို ခရစ်တော်ဟု လှည့်ဖြားပုံဆောင်သည့် နတ်ဆိုးကို ဦးစွာရည်ညွှန်းထာ ဟန်ရှိသည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုက "ကျွနု်ပ်တို့မဟောမပြောသော အခြားယေရှု" အကြောင်း ကို သတိပေးထားပါသည်။ ( ၂ကော ၁၁း ၄ ) တမန်တော်ကလည်း ဤသို့ဆိုသည်။
"၀ိညာဉ်တော်သည် အတည့်အလင်း ဗျာဒိတ်ထားတော်မူသည် ကား၊ နောင်ကာလ၌ သြတ္တပ္ပစိတ်တွင် သံပူနှင့်ခတ်ခြင်းကိုခံပြီး လျှင်၊ မုသာစကားကိုပြောတတ်သောသူတို့၏လျှို့ဝှက်ခြင်းအား ဖြင့်၊ လူအချို့တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပယ်၍၊ လှည့်ဖြားတတ် သောစိတ်ဝိညာဉ်တို့၌၄င်း၊ နတ်ဘုရားတို့နှင့်စပ်ဆိုင်သော သြဝါဒ တို့၌၄င်း၊ မှီဝဲဆည်းကပ်ကြလိမ့်မည်။" (၁တိ ၄း ၁)
ယနေ့ခေတ်တွင် ကျွနု်ပ်တို့သည် အသင်းတော်များတွင် တရားဟောကြားလျက်ရှိကြ သည့် ဘုရားမဲ့ဝါဒများ၏ "နတ်ဘုရားတို့၏ဝိညာဉ်" အကြောင်းကို ကျွနု်ပ်တို့တွေ့မြင်ကြရပါ သည်။ ထိုနိူ့စတိတ်ခရစ်တော်သည် ၀ိညာဉ်တစ်ပါးဖြစ်ပြီး သမ္မာကျမ်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည့် ခရစ်တော်၏ စစ်မှန်သောအသွေးအသားနှင့် အရိုးတော့မဟုတ်ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာက "ခရစ် တော်သည် ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့်ပြန်လည်ကြွလာမည်ဟု မယုံကြည်သောဝိညာဉ်တိုင်းသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါွးစေခြင်းမဟုတ်" ( ၁ယော ၄း ၃ ) ဟုဆိုသည်။ ယနေ့ခေတ်ဘာသာပြန်ကျမ် အားလုံးတွင် ထိုကျမ်းပိုဒ်နှင့်ပါတ်သက်ပြီး KJV ကသာမှန်ကန်စွာ ပြန်ဆိုထားပါသည်။ ဂရိစကားလုံးမှာ "eleluthota" ဖြစ်သည်။ ဖြစ်ပြီးကာလဖြင့်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်တော်၏မျက်မှောက်အခြေအနေကိုပင် ဖော်ပြထားပါသည်။ (Jamieson, Fausset and Brown) KJV က မှန်ကန်စွာဘာသာပြန်ဆိုထားသည်ဖြစ်၍ "ကိုယ်ခန္ဓာဖြင့်ကြွလာမည်" ဟုဆို ထားပါသည်။ သူသည် အသွေးအသားဖြင့်ပြန်လည်ကြွလာမည်၊ အသွေးအသားဖြင့်တည်နေ မည်၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်သော ကိုယ်ခန္ဓာအသွေးအသားပင်ဖြစ်ပါသည်။ သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထ မြောက်ပြီးနောက်တွင် ယေရှုက "ကျွနု်ပ်၌ရှိသည်ကိုမြင်တွေ့ရသကဲ့သို့ ၀ိညာဉ်တွင် အသွေး အသားမရှိ" ဟုဆိုပါသည်။ ( လုကာ ၂၄း ၃၉) ထို့ကြောင့် ယနေ့ဝိညာဉ်ခရစ်တော်များမှာ နတ်ဆိုးများသာဖြစ်ကြသည်။
ဆက်လက်၍၊ မဿဲ ၂၄း ၂၄ တွင် ခရစ်တော်က ဤသို့ဆိုသည်။
"အကြောင်းမူကား၊ ခရစ်တော်၏အယောင်ကိုဆောင်သောသူနှင့် မိစ္ဆာပရောဖက်တို့သည်ပေါ်လာ၍၊ ရွေးချယ်သောသူတို့ကိုပင် လှည့်ဖြားနိူင်လျှင် လှည့်ဖြားလောက်အောင်ကြီးစွာသော နိမိတ် လက္ခဏာ၊ အံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကိုပြကြလိမ့်မည်။" (မဿဲ ၂၄း ၂၄ )
ကျွနု်ပ်တို့ကို ဤမကောင်းသောနေ့ရက်များတွင် "နိမိတ်များနှင့်အံ့သြဘွယ်ရာများ"က မလိမ်မိ စေရန် သတိပြုရမည်။
"အကြောင်းမူကား၊ ထိုသူတို့သည် မိစ္ဆာတမန်တော်ဖြစ်ကြ၏။ ခရစ်တော်၏တမန်ဖြစ်ယောင်ဆောင်၍၊ လှည့်ဖြားတတ်သောအမှု စောင့်ဖြစ်ကြ၏။ ဤအမှုသည် အံ့သြဘွယ်ဖြစ်သည်မဟုတ်။ စာ တန်ပင်လျှင် လင်းသောကောင်းကင်တမန်ဖြစ်ယောင်ဆောင် တတ်၏။ သို့ဖြစ်၍ သူ၏ဆရာတို့သည်လည်း ဖြောင့်မတ်ခြင်းတ ရားကိုဟောသောဆရာဖြစ်ယောင်ဆောင်လျှင်၊ အဘယ်ဆိုဘွယ် ရှိသနည်း။ သူတို့သည် ကိုယ်ကျင့်သောအကျင့်အတိုင်း နောက်ဆုံ ၌ အကျိုးအပြစ်ကိုခံရကြလတံ့။" ( ၂ကော ၁၁း ၁၃-၁၅ )
"အကြောင်းမူကား၊ နောင်ကာလ၌ လူတို့သည် စင်ကြယ်သော သြဝါဒကို နာမခံနိူင်ကြဘဲ၊ ယားတတ်သောနားရှိလျှင်၊ မိမိတပ် မက်ခြင်းအတိုင်းများပြားသောဆရာတို့နောက်သို့လိုက်ကြလိမ့်
မည်။ သမ္မာတရားကိုနားမထောင်ဘဲ ဒဏ္ဍာရီစကားကို နားထောင် ၍ လွဲသွားကြလိမ့်မည်။" ( ၂တိ ၄း ၃-၄ )
ကျွနု်ပ်တို့သည် တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ၂သက် ၂း ၃တွင် ကြိုတင်ပြောဆိုခဲ့သည်အတိုင်း မှားယွင်းသောအယူဝါဒ ရှိသည့်အချိန်ကာလတွင် အသက်ရှင်နေကြပါသည်။
"မတရားသောအမှုသည်များပြားသဖြင့် အများသောသူတို့၏ချစ် ခြင်းမေတ္တာသည် ခေါင်းပါးလိမ့်မည်။" ( မဿဲ ၂၄း ၁၂ )
အသင်းတော်တွင်ရှိသောသူများအချင်းချင်းကြားတွင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ခေါင်းပါးတော်မူ မည်အကြောင်းကို ခရစ်တော်က ကြိုတင်ဟောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။အသင်းတော်များသည် တနင်္ဂနွေနေ့ညတွင် စစ်မှန်သောမိတ်ဿဟာရသည် အတိတ်တွင်သာကျန်ရစ်တော့သည်ဖြစ် ၍ ပိတ်ကြပါသည်။ အသင်းတော်ရှိအသင်းသားများသည်လည်း ကနဦးအသင်းတော်များတွင် ရှိသကဲ့သို့ အတူတကွရှိနေခြင်းကို မနှစ်သက်ကြတော့ပေ။ (တမန် ၂း ၄၆-၄၇) နောက်ဆုံး သောကာလတွင် ဆုတောင်းခြင်းသည်လည်း တွန့်ဆုတ်မည်အကြောင်းကို ခရစ်တော်က ကြို တင်ဟောကြားခဲ့ပါသည်။ (လုကာ ၁၈း ၁-၈ ) ယနေ့တွင် ဆုတောင်းအစည်းအဝေးနည်းပါး သည်မှာ အံ့သြစရာမရှိပါ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညအစီအစဉ်ကို ဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်မှ ကျမ်းစာလေ့ လာခြင်းအစီအစဉ်သို့ ဆုတောင်းခြင်း တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်လုပ်ဆောင်၍ ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ ထိုအရာမှာလည်း နောက်ဆုံးသောကာလ၏ နိမိတ်ပင်ဖြစ်သည်။ "လူသားသည်ကြွလာသော အခါ ယုံကြည်ခြင်းကို မြေကြီးပေါ်မှာ တွေ့မည်လော။"(လုကာ ၁၈း ၈ )သို့သော် ယေရှုက ဤသို့မိန့်တော်မူသည်။
"ထိုအမှုအရာတို့သည် ဖြစ်စရှိသောအခါ၊ လူတို့ကိုရွေးနှုတ်သော အချိန်ကာလ ရောက်လုနီးသည်ကို ထောက်သဖြင့်၊ မြော်ကြည့်၍ ခေါင်းကိုကြွကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏။" (လုကာ ၂၁း ၂၈ )
သီချင်းနံပါတ်သုံး အပိုဒ်နှစ်ကို သီဆိုကြပါစို့။
ညအချိန်မှောင်မိုက်ခါ၊ အပြစ်သည် ကျွနု်ပ်တို့ကိုဆန့်ကျင်၊
("သူတဖန်ကြွလာမည်"၊ Mabel Johnston Camp ၁၈၇၁-၁၉၃၇ )
၂။ ဒုတိယအချက်၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းနိမိတ်လက္ခဏာများ
"ထိုကာလ၌ လူများတို့သည် သင်တို့ကိုညှင်းဆဲခြင်း၊ အသေသတ် ခြင်းကိုခံစေခြင်းငှါ အပ်နှံကြလိမ့်မည်။ ငါ၏နာမကြောင့်လည်း ခပ် သိမ်းသောလူမျိုးတို့သည် သင်တို့ကို မုန်းကြလိမ့်မည်။ ထိုကာလ၌ အများသောသူတို့သည် ဖောက်ပြန်ခြင်းသို့ရောက်၍၊ အချင်းချင်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အပ်ကြလိမ့်မည်။"(မဿဲ ၂၄း၉-၁၀)
"ထိုကာလ၌ ညီအစ်ကိုချင်း တယောက်ကိုတယောက်သေစေခြင်း ငှါ အပ်လိမ့်မည်။ အဘသည်လည်း သားကို အပ်လိမ့်မည်။ သား သမီးတို့သည်လည်း မိဘကို ရန်ဘက်ပြု၍ သေစေကြလိမ့်မည်။ လူအပေါင်းတို့သည်လည်း ငါ၏နာမကြောင့် သင်တို့ကို မုန်းကြ လိမ့်မည်။ အကြင်သူသည် အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်၏။ ထို သူသည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။" ( မာကု ၁၃း ၁၂-၁၃)
ကမ္ဘာလောကကြီး၏များစွာသောနေရာဒေသတွင် ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ ညှင်းပန်းနှိပ် စက်ခြင်းသည် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုအကြောင်းအရာနှင့်ပါတ်သက်၍ဖတ်ရှုရန် www.persecution.com တွင် နှိပ်ပါ။ အိုင်အက်စ်အိုင်အက်စ်သည် ထောင်ပေါင်းများစွာစုစည်း ပြီး ခရစ်ယာန်များကို သတ်ဖြတ်ကြပါသည်။ သူတို့၏အဓိကပန်းတိုင်မှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင် အမြစ်ဖြတ်ပစ်ရန်ဖြစ်သည်။ အနောက်တိုင်းကမ္ဘာတွင်လည်း စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်များအပေါ်ကျရောက်သည့် စဉ်းလဲသော ဖိအားများကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။ သစ္စာရှိသောသင်းအုပ်များကို အသင်းတော်ကိုပြိုကွဲစေသောသူများက တိုက်ခိုက်ကြပါသည်။ မိဘများသည် ၄င်းတို့၏သားသမီးများအား ခရစ်ယာန်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ကြ သည်။ အလေးအနက်ယုံကြည်မှုရှိသည့်ခရစ်ယာန်အသက်ကြီးသောမိဘများကို အချို့တို့က မည်သို့လုပ်ဆောင်ကြသည်ကို တွေ့ရှိရပေမည်။ အချို့တို့ကို သော့ခတ်လှောင်ပိတ်ကြသည်။ ၄င်းတို့၏ခရစ်ယာန်မဟုတ်သော သားသမီးများက လုံးဝမကြည့်ရှုကြပါ။ သင်းအုပ်များစွာက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ရှိသောခရစ်ယာန်များသည် သာ၍ကြီးမားသောညှင်းပန်းနှိပ်စက် ခြင်းကို ခံရကြမည်ဟု သူတို့ထင်မြင်ကြောင်း ကျွနု်ပ်ကို ပြောခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ယေရှုမိန့် တော်မူသောအရာကို သတိရပါ။
"သူတပါးတို့သည် သင်တို့သည် လူသားကြောင့် သင်တို့ကိုမုန်း သောအခါ၊ ပယ်ရှားနှင်ထုတ်၍ ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ အသရေရှုတ်ချခြင်းကို ပြုသောအခါ သင်တို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏။ ထိုကာလ၌ဝမ်း မြောက်ခြင်းရှိကြလော့။ ရွှင်မြူးသောစိတ်နှင့်ခုန်ကြလော့။ အ ကြောင်းမူကား၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ သင်တို့၏အကျိုးသည်ကြီးလှပေ ၏။သူတို့၏ဘိုးဘေးများသည် ပရောဖက်တို့ကို ထိုသို့ပင်ပြုကြပြီ။ (လုကာ ၆း ၂၂-၂၃ )
သီချင်းနံပါတ်သုံး ဒုတိယစာပိုဒ်ကို ထပ်၍ သီဆိုကြပါစို့။
၃။ တတိယအချက်၊ ကမ္ဘာအနှံ့ဧဝံဂေလိဆိုင်ရာနိမိတ်လက္ခဏာရှိသည်။
ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည့်နိမိတ်လက္ခဏာများကြားတွင် ဤခွန်အားပေးသောနိ မိတ်ပေါ်လာခြင်းသည် အလွန်ပင်ထူးဆန်းသည်ကို သတိပြုပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီး အားလုံးမတ်တပ် ရပ်လျက် မဿဲ ၂၄း ၉-၁၄ ကို ဖတ်ရှုကြပါစို့။
"ထိုကာလ၌လူများတို့သည် သင်တို့ကို ညှင်းဆဲခြင်း၊ အသေသတ် ခြင်းကို ခံစေခြင်းငှါအပ်နှံကြလိမ့်မည်။ ငါ၏နာမကြောင့်လည်း ခပ် သိမ်းသောလူမျိုးတို့သည် သင်တို့ကို မုန်းကြလိမ့်မည်။ ထိုကာလ၌ အများသောသူတို့သည် ဖောက်ပြန်ခြင်းသို့ရောက်၍၊ အချင်းချင်း တစ်ယောက်ကိုတယောက်အပ်ကြလိမ့်မည်။ အချင်းချင်း မုန်းကြ လိမ့်မည်။ မိစ္ဆာပရောဖက်အများတို့သည်ပေါ်လာ၍ လူအများတို့ ကိုလှည့်ဖြားကြလိမ့်မည်။ မတရားသောအမှုတို့သည် များပြားသ ဖြင့် အများသောသူတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ခေါင်းပါလိမ့်မည်။ အကြင်သူသည် အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်၏။ ထိုသူသည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ လူမျိုးအပေါင်းတို့အား သက် သေဖြစ်မည်အကြောင်း နိူင်ငံတော်နှင့်ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရား ကို လောကီနိူင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှတို့၌ ဟောရလိမ့်မည်။ သို့ပြီးမှ အဆုံးသည် ဖြစ်လတံ့။" ( မဿဲ ၂၄း ၉-၁၄ )
"နိူင်ငံတော်နှင့်ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရား" မှာ မာကု ၁၃း ၁၀ တွင်ဖော်ပြထားသည့် "ဧဝံဂေလိတရားကို ရှေးဦးစွာလူမျိုးအပေါင်းတို့အားဟောရလိမ့်မည်" ဟုဆိုသည့် "ဧဝံဂေလိတ ရား" ဖြစ်သည်။ မှားယွင်းရှုပ်ထွေးမှုများရှိနေသည့်အခိုက်အတန့်တွင် ခရစ်တော်က ဧဝံဂေလိ တရားကို ဟောပြောရလိမ့်မည်၊ "နောက်မှအဆုံးသည် ဖြစ်လတံ့" ဟုဆိုပါသည်။ (မဿဲ ၂၄း ၁၄ )
ပရောဖက်ပြုချက်ပါတကား! ကျွနု်ပ်တို့၏အချိန်ကာလတွင် ဧဝံဂေလိတရားမဟောနိူင် သည့်နေရာမှာ အနည်းငယ်သာကျန်တော့သည်။ အင်တာနက်၊ ရေဒီယို၊ လေလှိုင်း၊ ဂြိုလ်တု၊ ထောင်ပေါင်းများစွာသောသာသနာပြုဆရာများအားဖြင့် ဧဝံဂေလိတရားကို ကမ္ဘာအနှံဟော ပြောကြပါသည်။ မဿဲ ၂၄း ၁၁-၁၄ သည် ကျွနု်ပ်တို့မျိုးဆက်တွင် ပြည့်စုံလာသည်။ အနောက် တိုင်းတွင်ရှိသောအသင်းတော်များကို ပိတ်ထားပြီး ၄င်းတို့၏ညနေပိုင်းအစီအစဉ်များကို ရပ်တန့်ခြင်းသည်လည်းကောင်း၊ တတိယနိူင်ငံများဖြစ်ကြသည့် တရုတ်၊ အရှေ့တောင်အာရှ၊ အိန္ဒိယပြည်ရှိထိ၍မရနိူင်သောနယ်မြေများတွင် ဧဝံဂေလိတရားပေါက်ကွဲမှုရှိသင့်သည်ဟူသည် မှာလည်းကောင်း အလွန်ပင်ထူးဆန်းလှပေသည်။ မှားယွင်းသောသြဝါဒနှင့်နိူင်းထမှုသည် ယေရှုက ကြိုတင်ဟောပြောခဲ့သကဲ့သို့ တချိန်တည်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ ထူးဆန်းသော ၀ိရောဓိပါတကား! သို့သော် ထိုအရာများမှာ ခရစ်တော်က ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဟု ကြိုတင်ဟော ပြောခဲ့သည့် အရာဖြစ်ပျက်ရုံသက်သက်သာဖြစ်ပါသည်။
"လူမျိုးအပေါင်းတို့အားသက်သေဖြစ်မည်အကြောင်းနိူင်ငံတော်နှင့် ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားကို လောကီနိူင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှတို့၌ ဟောရလိမ့်မည်။ သို့ပြီးမှ အဆုံးသည်ဖြစ်လတံ့။" ( မဿဲ၂၄း၁၄)
ဟာလေလုယ၊ ယေရှုတဖန်ကြွလာမည်။ ထပ်၍ဆိုကြပါစို့။
ခရစ်တော်ကိုသိပါသလား။ သူပြန်လာမည့်အချိန်အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလည်။ သင်ပြောင်းလဲခြင်းခံရပြီလား။ "ပြန်လည်ဆက်ကပ်ခြင်း"သည်လည်း ပျောက်ဆုံးနေလျှင် ကူညီ နိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့သည် ပျောက်သောသားကဲ့သို့ ခရစ်တော်ထံသို့ပြန်လာသည်ဟု ဆို ကြသည်။ သို့သော် သမ္မာကျမ်းစာက ပျောက်သောသားသည် တကြိမ်က ကယ်တငြ်ခင်းရပြီး ပြန်လဲသဖြင့် တဖန်ဆက်ကပ်သောအသက်တာတွင် အသက်ရှင်သည်ဟု မဆိုထားပါ။ သမ္မာ ကျမ်းစာက ကျွနု်ပ်တို့သည် ပျောက်ဆုံးကြောင်းသာပြောသည်။ ခမည်းတော်က ဤသို့ဆိုသည်၊
"ငါ့သားသည် အထက်ကသေ၏။ ယခုရှင်ပြန်၏။အထက်က ပျောက်၏။ ယခုတွေ့ပြန်၏။" (လုကာ ၁၅း ၂၄ )
သင်သည် ပျောက်ဆုံးကြောင်းသိရှိလျက် ခရစ်တော်ထံသို့လာရပါမည်။ ဧဝံဂေလိဆရာကြီး George Whitefield ( ၁၇၁၄-၁၇၇၀ )ရေးသားသည့် "ကျေးဇူးတော်နည်း လမ်း" ကိုဖတ်ရှုရန် ဤနေရာ တွင်နှိပ်ပါ။
သင်သည် ပျောက်ဆုံးသောသူဖြစ်ကြောင်း သိရှိထားခြင်းမရှိလျှင် သင်သည် ခရစ် တော်ထံသို့လာသည်မဟုတ်။ ခရစ်တော်ကို အားကိုးယုံကြည်သည်လည်းမဟုတ်ပါ။ စစ်မှန် သောပြောင်းလဲမှုကိုလည်း မတွေ့မြင်နိူင်ပါ။ ခရစ်တော်၏အသွေးတော်အားဖြင့် အပြစ်ဆေး ကြောခြင်းကိုလည်း ခံရမည်မဟုတ်။ သို့မဟုတ် ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြင့် အသစ် ပြုပြင်ခြင်းခံရခြင်းလည်း မဖြစ်နိူင်ပါ။
အိုဘုရားသခင်၊ ဤစာကိုဖတ်ရှုခြင်း သို့မဟုတ် ကြားနာခြင်းအားဖြင့် သို့မဟုတ် ကျွနု်ပ် တရားဟောနေသည်ကို YouTube သို့မဟုတ် website တွင်ကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ကိုသိ မြင်လာကြပြီး သားတော်ယေရှုခရစ်ကို အားကိုးယုံကြည်လာကြပါမည်အကြောင်းဆုတောင်း ပဌနာပြုပါ၏။ အာမင်….။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ ကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းကို Mr. Abel Prudhomme ကဆောင်ရွက်သည်။ မာကု ၁၃း ၁- ၁၃
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ Mr. Benjamin Kincaid Griffith ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းသည်။ “ယေရှုတဖန်ကြွလာမည်”၊
John W. Peterson, ၁၉၂၁-၂၀၀၆ ရေးစပ်သည်။ )
(မဿဲ ၂၄း ၁-၂၊ လုကာ ၂၁း ၂၀-၂၄၊ မဿဲ ၂၄း ၁၄၊ ၃၆ )
၁။ ပထမအချက်၊ အသင်းတော်များတွင်ရှိသော နိမိတ်လက္ခဏာများ ၊ မဿဲ ၂၄း ၄-၅၊ ၁တိ ၄း ၁၊ ၂ကော ၁၁း ၄၊ ၁ယော ၄း ၃၊ လု ၂၄း၃၉၊ မဿဲ ၂၄း ၂၄၊ ၂ကော ၁၁း ၁၃-၁၅၊ ၂တိ ၄း ၃-၄၊ ၂သက် ၂း ၃၊ မဿဲ ၂၄း ၁၂၊ တမန်တော် ၂း ၄၆-၄၇၊ လုကာ ၁၈း ၁-၈၊ ၂၁း ၂၈၊ ၂ပေ ၃း ၃-၄၊ မဿဲ ၂၅း ၅။
၂။ ဒုတိယအချက်၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းနိမိတ်လက္ခဏာများ၊မဿဲ ၂၄း၉- ၁၀၊ မာကု ၁၃း ၁၂-၁၃၊ လုကာ ၆း ၂၂-၂၃။
၃။ တတိယအချက်၊ ကမ္ဘာအနှံ့ဧဝံဂေလိဆိုင်ရာနိမိတ်လက္ခဏာရှိသည်။ မဿဲ ၂၄း ၉-၁၄၊ မာကု ၁၃း ၁၀၊ လုကာ ၁၅း ၂၄